Beled-Xaawo: Tirada dadka lagu arkay Calaamadaha Coronavirus ee dhintay oo kordhay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Covid19 Beled-Xaawo: Tirada dadka lagu arkay Calaamadaha Coronavirus ee dhintay oo kordhay
Magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo waxa sii kordhaya tirada dadka dhintay iyagoo leh astaamaha Fayraska Korona iyo kuwa u jiifa calaamadaha xanuunkaasi.
Sideed iyo afartankii saac ee la soo dhaafay ayaa la sheegay inay dhinteen lix qof oo markii hore lagu arkay xumad daran, qufac, dhadhanka iyo urta oo ka tagta iyo neefta oo qabata. Beledxaawo malaha shaybaadh lagu ogaan karo haddii xanuunka dadkani u dhinteen uu yahay COVID-19 iyo haddii uu yahay cudur kale balse kooxda caafimaadka ee magaalada ayaa horey Muqdisho ugu diray baaritaannada labo qof oo midkood cudurka laga helay.
Dhawr iyo toban qof oo kale oo laga qaaday baaritaano la xiriira Fayraska Korona ayaa maanta Xamar loo duuliyay baaritaannadii laga qaaday. Adeega caafimaadka ee magaalada ayaa aad u liita.
Dadka deegaankuna kuma baraarugsanna khatarta cudurka iyagoo aan dhag jalaq u siin talooyinka caafimaadka ee ka hortaga Xanuunnka COVID-19 Isuduwaha caafimaadka ee degmada Beledxaawo Axmed Caddow ayaa sheegaya inay kordheen dadka leh astaamaha Fayraska Korona maalmihii la soo dhaafay.
“Tirada la jiifta xanuunka waxay gaarayaan afartameeyo, dadka u dhintay ee muujiyay calaamadihii cudurkana waa dad gaaraya lix qof. Dadka xanuunka u jiifa calaamadaha lagu arkay waxa kamid ah qufac, cunihii oo xanuunaya, qandho daran, urtii oo ka tagta, iyo xanuun ay jirka ka dareemayaan” Ayuu yiri Axmed Caddow.
Tirada guud ee cudurka COVID-19 laga helay guud ahaan Soomaaliya ayaa gaaraysa 1,976 iyadoo tirada u dhimatayna lagu sheegay 78. Illaa hadda waxa cudurka ka bogsaday 348.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 01-06-2020
Next articleBooliska Kenya oo toogtay Nin ay uga shakiyeen in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab